Fahazavana 17 azo farany! | Avy amin'ny Linux
Omaly ny kinova farany an'ny Fahazavana 17, izay manakaiky ny 12 taona rehefa avy nanomboka ny fivoarany.
Ny fahazavana, fantatra ihany koa amin'ny hoe E, dia mpitantana varavarankely maivana ho an'ny UNIX sy GNU / Linux. Iray amin'ireo tanjona kendreny ny hanjary tontolon'ny birao feno. Tena azo configurable sy tena mahasarika maso. Nandritra ny fotoana kelikely dia ny mpitantana ny varavarankely GNOME.
Ny kinova farany azo antoka dia E16 1.0.7 (antsoina koa hoe DR16). Androany dia nisakafo maraina izahay tamin'ny famoahana ilay kinova VERY nandrasana 0.17 (DR17), izay miorina amin'ny Enlightenment Foundation Library (EFL) vaovao. DR17 dia tsy mifototra amin'ny DR16 fa naverina nosoratana tanteraka.
sudo apt-add-repository ppa: efl / vatan-kazo
sudo apt-mahazo mametraka e17
pacman -S fahazavana17
Ny ambiny, azonao atao ny misintona ny kaody loharano ary manangona azy.
Sintomy ny e17
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Fahazavana 17 azo farany!